Xildhibaan Cayaar-jecel: "Fadhiga labada Aqal waa sharci-darro, Madaxweynuhuna Dastuurkii ayuu jebiyey.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Toos u Daawo: Kulanka Golaha Guud ee Q/Midoobay, New York (Khudbadaha Madaxda Caalamka)
Dowladda Mareykanka oo Farmaajo iyo Rooble uga digtay inuu khilaafkooda dhaliyo qalalaase iyo dib u dhaca..
Afgembi fashilmay oo ka dhcay dalka Suudaan iyo Wararkii ugu danbeeyay..
Xogta kulankii uu Fahad Yaasiin ugu yeertay Taliyeyaasha Ciidamada Dalka iyo wixii ka dhacay (Akhriso)
XOG: Farmaajo oo laba Qodob laga fujin waayay iyo Rooble oo lagu cadaadinayo inuu laba jago qaato
C/raxmaan C/shakuur:”Qoladii waanwaanta ku jirtay way ka soo quusteen Farmaajo…”
Yaa shaaciyey inuu Muqdisho ku laabtay Agaasmihii hore ee Hay’ada NISA Fahad Yaasiin..?
Xildhibaan Cayaar-jecel: “Fadhiga labada Aqal waa sharci-darro, Madaxweynuhuna Dastuurkii ayuu jebiyey..”
Xildhibaan Cabdi Shir Jaamac (Cayaar-jecel) ayaa sharci darro ku tilmaamay kulanka labada Aqal ee Baarlamaanka maanta yeelaayan oo la shaaciyey in loogu codeynayo Heshiis Doorasho oo ay gaareen Madaxweynaha iyo madaxda Maamul Goboleedyada dalka.
Wuxuu ku dooday in kulamada ay labada Aqal wadajirka u yeelan karaan ay cad yihiin sida doorashada Madaxweynaha, balse aanu soconeyn xeer jajab, wuxuuna intaasi ku daray in wax lala yaabo ay tahay in Ajende laga dhigo ‘U codeynta Heshiiska Jiheynta Doorashda’ oo aan xitaa laga doodeynin.
“Ajendaha naloo soo diray wuxuu nagu noqday fajac, sharciyada labada Aqal ku kulmayo ayaa la isku heystaa.. waxa naloo soo diray in loo codeynayo oon laga doodeyn.. In Madaxweynaha oo ahaa ilaaliyaha Sharciga inuu heshiis la galo maamul Goboleedyo ayaa sharci darro ah. Heshiiskan waa mid lagala caraarayo Ra’isal wasaaraha..” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Shire oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu ku biiray ganacsatada siyaasadeed ee Imaaraadka iyo Qatar kaal jiidanayaan.
Cabdi Shire Cayaar jecel
Previous articleKhadiijo Diiriye oo taageertay Heshiiska Jiheynta Doorashada, kana furatay hoggaamiyaha siyaasadda Beesha
Next articleCiidamada Dowladda Somaliya iyo kuwa Kenya oo ku dagaalamay Xuduudka Beled-xaawo & Mandhera
Wasiirka Qorsheynta oo xaalad kacsan ka abuuray Garowe iyo ciidamo isku hor fadhiya Garoonka…
Maxay ka wadahadleen RW Rooble, Madaxda Maamul Goboleeyada iyo Gud. Guddiga Doorashada FEIT?.
Somaliland oo War cad kasoo saartay Doorashada Somaliya. “Somaliland waxay ka digaysaa khiyaaliga..”
Faahfaahin laga helay Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada Marko
Axmed Fiqi oo jawaabtii ugu cusleyd siiyey Cali Yare. “Calaamadaha aakhiru-zamaanka waxaa ka mida..”
Sidee Cabdi Xaashi keligiis loogu xiray Kursi ka tirsan Aqalka sare..? (Xildhibaan Maareeye oo kashifay)